Junior Win (ဂျူနီယာဝင်း) : October 2014
စာအုပ်ဆုိုင်မှာ တွေးမိတဲ့အတွေးတစ်စ ဂျူနီယာဝင်း
(အင်္ဂလ်ိပ်လုိုရေး Junior Win’s A Day at the Bookshop ကုိုကုိုယ်တုိုင် ဘာသာပြန်ထားသည်။)
သည်ကနေ့ စာအုပ်ဆုိုင်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ Encyclopedia စာအုပ်တွေကြည့်ရင်း သင့်တော်ရာတွေ့ရင် ၀ယ်မလုို့ပါပဲ။ အခုကျွန်မက ပညာရေးဂျာနယ်တစ်စောင် အတွက် အပတ်စဉ် ”အားလုံးအတွက်စွယ်စုံကျမ်း” အမေးအဖြေပုံစံတွေ ရေးပေးနေရတယ်။ အိမ်မှာက
Encyclopedia စာအုပ်တွေက ရှိပါတယ်။ အစကတည်းကလဲ Encyclopedia စာအုပ်တွေ ဖတ်ရတာဝါသနာ ပါတဲ့သူမုို့ သိပ်ပြသနာမရှိပါဘူး။ သုို့သော်လည်း အပ်ဒိတ်ဖြစ်မယ့် အချက်အလက်တွေပါတဲ့ သကရ်ာဇ် ၂၀၀၀ နောက်ပိုင်းကနေ ၂၀၁၁ ၂၀၁၃ စသည်ဖြင့် Encyclopedia စာအုပ်တွေ တော့ လိုချင်တယ်။ ဒါကြောင့်လဲ သည်နေ့ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေ ရောင်းတဲ့ စာအုပ်ဆုိုင်ကုိုရောက်ခဲ့တာပေါ့။
သည်လုို စာအုပ်ဆုိုင်တွေမှာ Encyclopedia စာအုပ်တွေက ပေါပါတယ်။ တစ်အုပ်ပြီးတစ်အုပ် စိတ်ရှည်ရှည် ဖတ်ရှာရပါတယ်။ ပညာရေးဂျာနယ်လေးက ကလေးတွေရော လူငယ်တွေအတွက်ပါ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ သည်တော့ ဘာသာပြန်ဖုို့ သင့်တော်တာမျိူး ရွေးရပါတယ်။ ဟုတ်တယ်။ ကျွန်မတုို့ မြန်မာပြည်မှာ… မြန်မာပြည်ကစာဖတ်ပရိသတ်က မြန်မာလုို စာအုပ်တွေကို အင်္ဂလိပ်လုိုရေးတဲ့ စာအုပ်တွေထက် ပုိုပြီး အားပေးကြတယ်။ ဖတ်ကြတယ်။ မြန်မာပြည်က မဂဇင်းတွေ၊ ဂျာနယ်တွေ အများစုက မြန်မာလုိုပဲ ထုတ်ကြတယ်။ သည်လုိုဆုိုလုိုက်တော့ မြန်မာပြည်သားတွေ အင်္ဂလိပ်စာမဖတ်နုိုင်ကြဖူး လုို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူတုို့က မြန်မာစာအုပ်ကုို အင်္ဂလိပ်လုို စာအုပ်တွေထက် ပုိုပြီး အားပေးတယ်လုို့ ဆုိုလုိုတာပါ။ သူတုို့က မြန်မာစာအုပ်ကိုပဲ ပုိုပြီး စိတ်ဝင်စားကြတယ်။ သူတုို့က မြန်မာလုိုရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ၊ ၀တုတွေ၊ သတင်းတွေကုို ပဲဖတ်ချင်ကြတယ်။ သည်တော့ စာဖတ်သူတွေက မြန်မာလုိုပဲဖတ်ချင်တယ်လုို့ တောင်းဆုိုကြရင် ကျွန်မတုို့စာရေးဆရာတွေက သူတုို့အကြိုက် မြန်မာလုိုပဲ ရေးပေးရမှာပဲ။ တခြားရွေးစရာမရှိပါဘူး။ ကုိုယ်ပြောချင်တာတွေ၊ သူတုို့သိစေချင်တဲ့ ကမာ့ Encyclopedia တွေကုို ဖတ်စေချင်တယ် ဆုိုရင် မြန်မာလုို ဘာသာပြန်ပေးရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လုို ကြိူးစားပြီး ရေးပြီးထုတ်သောလည်း မြန်မာစာဖတ်ပရိသတ် သိပ်မရတာကြောင့် ရူံးပါတယ်။ အစကတည်းက ကုိုယ့်စာအုပ်တွေ သိပ်မစွံရတဲ့အထဲ အင်္ဂလိပ်လုို ရေးထုတ်တော့ ပိုဆုိုးပါတယ်။ စာအုပ်တွေ ထွက်တော့ ထွက်နေတာပဲလုို့ စောဒကတက်ရင်တော့ အုပ်ရေ ၁၀၀၀ ဆုိုတာ မြန်မာပြည်လူဦးရေနဲ့ နှိူင်းယှဉ်ရင် မုိုးနဲ့ မြေကြီးလုို ကွာခြားလှသလုိုပါပဲ။ သုို့သော် စာရေးဆရာဆုိုတာ စာမရေးပဲမနေနုိုင်သလုို စာရေးပြီးရင်းရေးချင်နေတဲ့သူမုို့ ဖတ်တဲ့သူမရှိလဲ၊ စာအုပ်တွေရူံးလဲပဲ သိပ်ဂရုမစုိုက်လှပါဘူး။ အခုအွန်လုိုင်းခေတ်ရောက်လာ တော့ ရေးဖုို့ကပုိုပြီးတော့ အားပေးသလုိုတောင် ဖြစ်သွားပါတယ်။
အင်း…. .. အခုကျွန်မက စာအုပ်ဆုိုင်က စာအုပ်စင်လေးရှေ့မှာ ရောက်နေတယ်။ သည်စာအုပ်စင်လေးမှာ Encyclopedia တွေ အပြည့်ပါ။ ကုိုယ့်စိတ်သဘောသာဆုို အကုန်ဝယ်ဖတ်ချင်တယ်။ သုို့သော် မ၀ယ်နို်င်ဘူး။ ဈေးကလည်းတော်တော်ကြီး ပါတယ်။ သုို့သော်အဲသည်အပုံထဲကပဲ Science, Environment, World Atlas စီးရီး တွေသွားတွေ့တယ်။ စာအုပ်လေးတွေက ပါးပါးလေးပေမယ့် တော်တော်စုံတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ပါတယ်။ ဈေးကလည်း သင့်တော်တဲ့ ဈေးနှူန်းမုို့ အဲသည်ထဲက တစ် အုပ်နှစ်အုပ်လောက် ရွေးနေမိတယ်။
အဲသည် စင်မှာပဲ ‘Amazing Questions Incredible Answers for Children’ စာအုပ်တွဲတတွဲ ကိုသွားတွေ့ပါတယ်။ သူက ၆ အုပ်တွဲပါ။ တစ်အုပ်ကိုမှ ၂၅၀၀ကျပ်လောက်ပဲ ကျပါတယ်။ အရွယ်အစားအထူက ၀တုတစ်အုပ်စာလောက်ထူပါတယ်။ အမေးအဖြေပုံစံနဲ့ Encyclopedia ပါ။ ထုတ်တဲ့တုိုင်းပြည်က နယူးဒေလီ အင်ဒီးယားတဲ့။ India ကထုတ်တဲ့ ကလေးများအတွက် Encyclopedia က အင်္ဂလိပ်လုို ရေးထားတာပါ။ အိနိယဘာသာနဲ့ မရေးထားပါဘူး။ ဒါဟာ ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတုို့တုိုင်းပြည်မှာ Encyclopedia ကုိုမြန်မာလုို ဘာသာပြန် ထုတ်ပြီး ကလေးများ လူငယ်များ ပညာတုိုးပွားဖုို့ ကြိုးစားနေရချိန်မှာ India က သူတုို့တုိုင်းပြည်က ကလေးများအတွက် အင်္ဂလိပ်လုိုအတုိုင်း ရေးသား ပေးထုတ် ပေးဖတ်ပြီး ပညာတုိုးပွားဖုို့ ကြိုးစားနေတယ်။ “သင့်ကလေးငယ်များ အနာဂတ်ရှေ့ပြေးရုံမက ရှေ့ကုိုကြိုရောက်စေရန်..“ တဲ့။ သူတုို့ရည်ရွယ်ချက်က။
Encyclopedia လုိုစာအုပ်မျိူးကုို အိနိယ ကလေးငယ်များကုို အင်္ဂလိပ်လုို ပေးဖတ်ပါတယ်။ သုတုို့ဘာသာစကား မိခင်ဘာသာစကား အိနိယဘာသာနဲ့ မဖတ်ခုိုင်းပါဘူး။ ဒါ့အပြင် စာအုပ်ဈေးနှူန်းက မည်သူမဆုို ၀ယ်နုိုင် ဖတ်နုိုင်တဲ့ ဈေးနှူန်းနဲ့ ရောင်းပါတယ်။ စာရွက်သားညံ့ပေမယ့် သူုတုို့ကိုယ်တိုင် အိနီယက စာရေးဆရာများက အင်္ဂလိပ်လုို ရေးသားထုတ်ဝေထားတာပါ။ သူတုို့တုိုက်နံမယ်၊ လ်ိပ်စာနဲ့ သေချာတရားဝင် ထုတ်ထားတာ လုို့ယူဆပါတယ်။ အခုဆုိုရင် သူတုို့စာအုပ်များဟာ အခုလို အင်္ဂလိပ်စာအုပ်များရောင်းတဲ့ စာအုပ်ဆုိုင်ကြီးတွေမှာတောင် ၀င်ဆန့်နေပါပြီ။ အတွင်းကအချက်အလက်များက ကမာက Encyclopedia များထဲက ကောင်းနုိုးရာရာများအပြင် သူတုို့စိတ်ကြိုက် ဗဟုသုတများကုို ထုတ်ဖော်ကာ ရေးသား စီစစ်ထားတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
စာအုပ်ဆုိုင်က ပြန်လာတော့ အတွေးတွေ အပြည့်နဲ့ပါ။ ကျွန်မက Encyclopedia စီးရီးတစ်ခုကို မြန်မာလုို ဘာသာပြန်ခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ရေးသားထုတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူဖြစ်နေသောလည်း ကျွန်မတုို့ စာဖတ်သူတွေလည်း တစ်နေ့ကျရင် Encyclopedia ကုို မြန်မာလုိုထက် အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ဖတ်ချင်လာကြပြီလုို့ တောင်းဆုိုလာကြ ဖုို့မျော်လင့်မိတယ်။ အဲသည်လုို တစ်နေ့ဖြစ်လာမယ်လုို့ ကြိုသိနုိုင်မှာလား။ ဘယ်သူက သိမှာလဲ။
Posted by Junior Win at 4:39 AM No comments:
Labels: Articles, Book Shelf
ဆည်များ၏ နေရာ -ဂျူနီယာဝင်း
Junior Win ၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ထုတ် ‘Walking Through The Wonderland’ digital စာအုပ်မှ ‘Where Dams Dare’ ဟူသော ဆောင်းပါးကို ကိုယ်တုိုင် ဘာသာပြန်ပါသည်။
နှစ်ပေါင်းထောင်ချီကာ ရှင်သန်ခဲ့သော အီဂျစ်လူမျိူးများ နေထိုင်ကြခဲ့သော နုိုင်းမြစ်သည် သဲကနာရကို ဖြတ်ရွေ့စီးဆင်းလျက်ရှိသော ကမာပေါ်တွင် အရှည်ဆုံးမြစ်ဖြစ်ပါသည်။ သူက ဘူရန်ဒီကနေ မြေထဲပင်လယ်ထဲ ကုို စီးဝင်လျက်ရှိပါသည်။ မြောက်ဘက်ကနေ တောင်ဘက်ကုို စီးဆင်းလျက် အာဖရိက အေ၇ှ့ဘက်ဆီ ဖြတ်သန်းကာ သွားပါသည်။ နွေရောက်တုိုင်းမှာ သည်းထန်သောမုိုးများက နုိုင်းမြစ်ကုို ရေလွှမ်းမူများ ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။ အီသုို့ဖြစ်ခြင်းမှာ ရာသီလုိုက်ကျရောက်သည့် မုိုးသည် အာဖရိက တောင်ဘက်ပိုင်းတွင် သည်းထန်စွာရွာသွန်း သောကြောင့် လည်ကောင်း၊ အရှေ့အာဖရိကရှိ တောင်များက နှင်းများသည် အရည်ပျော်ရွေ့ နုိုင်းမြစ်ထဲ စီးဝင်လျက်ရှိသောကြောင့် လည်းကောင်း နှစ်စဉ်ပင် နိုင်းမြစ်က လျံလာသော ရေသည် အီဂျစ်ဘက်သုို့ ရေလျွမ်းသွားတာ ဖြစ်ပါသည်။ ထုိုရေလွှမ်းမူက တဖန် ပြန်ဆင်းသွာသောအခါ မာကျောသော မြေသည် အလွန်မြေသြဇာကောင်းသော မြေဆီလွှာများ အဖြစ်ကျန်ခဲ့ပါသည်။ ထုိုကဲ့သုို့သော သဘာဝအလျောက်ဖြစ်သော ရေတက်ရေကျ ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ရှေးဟောင်းအီဂျစ်ပြည်သည် စုိုက်ပျိူးရေးကုို အခြေခံပြီး အောင်မြင်သော ဒေသတစ်ခုဖြစ်ကာ မုန်တုိုင်းများကင်းစင်လျက် ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထား ကောင်းမွန် ခဲ့သည်ဟု ဆုိုရမည် ဖြစ်ပါသည်။ နုိုင်းမြစ်သည် လူတွေကုို ရေသောက်မြစ်ကြီး သဖွယ် ရှည်လျားစွာ စီးဆင်းပေးနေကာ အလုပ်အကြွေးပြုနေသည်ဟု ဆုိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင်မပြတ်စီးဆင်းနေသော ရေကြောင့် အပင်တွေရော တိရိစာန်တွေပါ ရှင်သန်နုိုင်ကြကာ အစာရေစာ ခေါင်းပါးသည် မရှိပဲ ငတ်မွတ်သော ဘေးများကင်းပါသည်။
အာစ်ဝန် ဟုအမည်တွင်သော မြင့်မားသော ဆည်ကြီးသည် အီဂျစ်တောင်ဘက်ပိုင်းရှိ နုိုင်းမြစ်ကုို ဖြတ်ကာ ၁၉၆၄ ခုနှစ်လောက်က အာစ်ဝန်ဒေသနားတွင် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ထုိုဆည်၏ နာဆာ အမည်ရှိ ရေလှောင်ကန်ကြီးသည် ကမာပေါ်တွင် အကြီးဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉ ၆၈ ခုနှစ်လည်ပုိုင်းလောက်က ထုိုတည်ဆောက်မူ ပြီးဆီးခဲ့ပါသည်။ ၁၉ ၇၁ ခုနှစ်မှာ တရားဝင် အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ သူက လျှစ်စစ်ဓါတ်အား ၂၁၀၀ မီဂါဝါဒ် စွမ်းရည် ထုတ်လုပ်ပါသည်။
အာစ်ဝန်ရေကာတာကြီးသည် ဧရိယာ တော်တော်များများကို အကျိူးအများကြီးပြုခဲ့သည် မှန်သောလည်း ပြသနာတွေရှိနေပါသည်။ နာဆာရေလှောင်ကန်ကနေ ရေလွှမ်းမုိုးမူကြောင့် နိုင်းမြစ်တလျောက်က ဒေသများဖြစ်သော အီဂျစ်နှင့် ဆူဒန်နှစ်ခုစလုံးမှာ လူများထောင်ချီပြီး ပြောင်းရွေ့နေရပါသည်။ နုိုင်းမြစ်တလျောက်က လယ်ယာများသည် မြေသြဇာနည်းပါးလာကာ ထုတ်လုပ်မူအား လျော့ကျလာနေပါသည်။ အကြောင်းမှာ မြစ်ရေ သုို့မဟုတ် ရေလွှမ်းမုိုးတာကြောင့် သဘာဝအလျောက်ရရှိသော မြေဆီဓါတ်များ နိမ့်ကျလာသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ လယ်သမားများသည် သီးနှံများ ထွက်ရှိဖုို့ ဓါတုပစည်းများ သုံးကြသောလည်း ဟုိုးအရင်တုန်းကလောက် အကျိူးသက်ရောက်မူ မရှိပါ။ ဆည်များသည် နုိုင်းမြစ်၏ ရေလွှမ်းမိုူးကုို ထိမ်းချူပ်လုိုက်သောကြောင့် ချိူင့်ဝှမ်းများ၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများက မြေကြီးများသည် မြေသြဇာမကောင်းပဲ အထွက်နျူန်းများ လျော့ကျလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရေကာတာ ခေါ် ဆည် များကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခုိုက်မူသည် ကြီးထွားလျက်ရှိပါသည်။ ဆည်များသည် မြစ်ရေကိုပိတ်ဆုို့ထားသောကြောင့် မြစ်ရေလျှံ မူနည်းပါးလာသောလဲ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အရပ်က ရေများလည်းတက်လာနေကာ မြေနှင့်ရေတုို့တွင် ဆားပါဝင်မူ များလာပါသည်။ ထုို့ပြင် အီဂျစ်နှင့် ဆူဒန်ဒေသက ရှေးကျသော နေထုိုင်မူစနစ်နှင့် ဆက်သွယ်မူအခြေအနေများသည် ရေကာတာများကြောင့် ပျောက်ကွယ်မူများ၊ နေရပြောင်းရွေ့ရမူများ ကြုံနေကြရပါသည်။
၁၉ ၉ ၃ ခုနှစ် အမျိူးသား ပထ၀ီမြေဆုိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၏ သုတေသနပြုချက်အရ ဒါနီရယ် ဂျေစတန်လေက နိင်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်နှင့် သက်ဆုိုင်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုို အဓိကထား လေ့လာမူတွင် “ဘာကြောင့် နုိုင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများ ပင်လယ်ရေ၏ ၀ါးမျိူမူများ ဖြစ်လာရသလဲ“ ဆုိုတာ ပါပါသည်။ ခေတ်မှီလာသော အခြေအနေများ ဥပမာ - လူဦးရေတုိုးပွားလာခြင်း၊ လေထုညစ်ညမ်းခြင်း၊ စုိုက်ပျိူးမြေ နည်းလာခြင်း၊ ဆည်မြောင်းတာတမန်များ များလာခြင်း၊ ဆားဓါတ်များ ၀င်ရောက်လာမူများလာခြင်း တွေကြောင့် နုိုင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများ ပျက်ဆီးခဲ့တာ ဖြစ်သည်ဟူရွေ့ အဖြေထွက်လာပါသည်။
ဧရာဝတီမြစ်သည် မြန်မာပြည် မြောက်ဖျားကနေ တောင်ဖက်ဆီသုို့ စီးဆင်းလျက်ရှိကာ ယခုအခါ မြစ်ဆုံတွင် ဆည်ကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ဖုို့ စိန်ခေါ်ခံနေရပါသည်။ ဆည်ကြီးသည် ပေ၅၀၀ အကျယ်နှင့် ပေ၅၀၀ အမြင့်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ဖုို့ အစီအစဉ်ချမှတ်ထားပါသည်။ မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းသည် ရွေ့ဆုိုင်းခြင်းသာ မရှိဘူးဆုိုပါ လျှင် ကမာပေါ်မှာ ဟုိုက်ဒရုိုအီလက်ထရစ် စွမ်းရည်စက်ရုံ အားဖြင့် ၁၅ ခုမြောက် အကြီးဆုံး ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်ရွေ့များ ၂၀၁၇မှာ စီမံကိန်းအတုိုင်းပြီးမြောက်ခဲ့မည် ဆုိုပါလျှင် ဧရာဝတီမြစ်ကြော တစ်လျောက် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်လျောက်မှာ နေထုိုင်နေကြသော လူများ သည် နုိုင်းမြစ် ကြောက ရင်ဆုိုင်နေရသော သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိုက်မူနှင့် အခြေအနေဆုိုးများကုို ရင်ဆုိုင်ကြရတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်ရွေ့များ ရွှေ့ဆုိုင်းထားသည်ဟူသော အဓိပယ်သည် ရပ်ပစ်လုိုက်သည် ဟူသော အဓိပယ် သက်ရောက်သည် ဆုိုမှသာလျှင် မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်နေသော စိတ်ပူပန်မူများ လုံးဝဥသုံ စိတ်သက်သာရာရသွား စေမှာ ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာပြည်က ဧရာဝတီမြစ်သည် မြစ်ကြောတစ်လျောက်က ပူပြင်းခြောက်သွေ့သော အရပ်မှာ နေထုိုင်ကြသော လူများအတွက် လယ်ယာမြေစိုက်ပျိူးဖုို့ ရေများရရှိစေပါသည်။လူတွေ ရေကြောင်းခရီးသွားလာခြင်း၊ ငါးမျှားခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ စိုက်ပျိူးခြင်း နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ် များကုို ပေးပါသည်။ ပန်းချီပညာရှင်များ အတွက် လှပသော ပန်းချီကားချပ်များ မွေးဖွားပေး နိုင်သလုို ကျွနိုပ်တုို့လည်း အတိတ်က ခြေရာဟောင်းများကုို လွမ်းမောဖွယ် တူးဆွရှာဖွေနုိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အခုတော့ ဧရာဝတီမြစ်သည် ရေကာတာတည်ဆောက်ဖုို့ အစီအစဉ် ရှိနေပြီဟု ကြားသိလုိုက်ရ ချိန်မှာ သည်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကုို ကောက်ရေုးလုိုက်မိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက်တာတုို့၊ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့် ဘာတွေဖြစ်မလဲဆုိုတာ နှင့်ပတ်သက်လုို့ ပညာရှင်တွေလို တိကျပြည့်စုံသော အသိပညာတော့ ကျွနို်ပ်မှာ မရှိပါ။ သုို့သော်လည်း သဘာဝတရားကုို ချစ်မြတ်နုိုးသော စိတ်ကိုကား ကျွနုိုပ်တုို့ မျိူးဆက်များ လက်ဆင့်ကမ်းသွားရင်းဖြင့် လှပသော အမှတ်တရများအဖြစ် ထာဝရတည်မြဲပါစေသတည်း။
(1) Science and Technology; essay ‘The Shrinking of the Delta’ from Frontiers II by Isaac and Janet Asimov 1993.
(2) From the research paper of National Geographic Society and Smithsonian Institution, by Oceanographer Daniel Jean Stanley in 1993.
(3) Microsoft Encarta of 2009
(4) အသက်ကုိုဖန်တီးခြင်းနှင့် သိပံစာတမ်းများ - ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း နှင့် တကသိုလ်ရွှေရီဝင်း
Posted by Junior Win at 4:09 AM No comments:
စာအုပ်ဆုိုင်မှာ တွေးမိတဲ့အတွေးတစ်စ ဂျူနီယာဝင်...